Page 12 – Nepali Live – Videos & Entertainment नेपाली लाइभ
कोरियाको किम्हे !
सियोलबाट जादा बसमा ४ घण्टा पुग नपुग लाग़्ने यो सहर गिम्हे वा नेपालीले प्रायः बोलाउने किम्हे नाममा हाल ३-४ सय नेपालीहरू छन ! नेपाल जस्तो अब चिसो सुरु हूने मौसममा यहा पनि हल्का पानी परिरहेको छ ! द शै सकिन आटदा बिदेशीको मन भने परिवार समझिरहेको छ ! द शैमा आकाश पनि मन जतिकै अध्यारो छ ! – नासाअरु पढ्नुहोस ...
गीतहरु, चलचित्रको गीतहरु, मुख्य
“किनाराले नदीलाई डोर्याए जस्तो, नदीले सागर पाए जस्तो……लाउला पिरती आज़म्बरी”: काली प्रशाद बास्क़ोटा र मेलिना राइको स्वरमा!
गीतहरु, चलचित्रको गीतहरु
तिमी रोएको पल तिमिलाई हसाउन नसकुला !
फूल फूलमा पात पातमा!
फूल र पात संगै रहदा
कति सुंदर छ दृश्य;
सोचेर हेर त
एक बिना अपुरो छ अर्कों !
अहिले त नशा जस्तो पो भो समाजसेवा : धुर्मूस -सुन्तली सिधा कुरामा!
यो भन्दा पहिलेको 1 … 10 11 12 13 14 यस पछिको